Akpa ejiji na ejiji - akpụkpọ anụ, nke a na-ejikọta, nke a na-ahụ maka ya,
Akpa na akpaaka - nhọrọ nke foto kachasị mma na akpa akpa aka
Ekike mara mma nke eji ejiji ejiji nwanyi na-ekwuputa ihe omuma na akwukwo nke mmadu n'ile ihe oyiyi ahu, na enyere onye nwe ya aka ka o di mma ma obughi ndi ozo. Otu n'ime ihe ngwọta kachasị ewu ewu na nke oge a aghọwo akpa na ejiji, nke ga - abughi naanị onye na - enye aka, ma ọ ga - abụkwa ihe na - egbuke egbuke.
Akpa na embroidery 2018
Na nchịkọta ọhụụ, ndị na-emepụta ihe na-adọrọ mmasị nke ọma na ọdịdị nke handbags mara mma. Echiche nke usoro ihe atụ a ga-adọrọ uche, na-emesi ọganihu nke fashionista. Na - emekarị, ihe ngwọta dịgasị iche iche - ihe ndọtị okooko osisi, Indian na lacy motifs, ihe ịchọ mma, ụdị mba, anụ anụmanụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. A na-enye ụdị ngwaahịa ndị ahụ dị ka ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ejikwa aka ha mee ya. Ihe dị iche na nhazi nke ngwa ngwa bụ nhọrọ nke ihe, ma maka isi na ụkpụrụ. Ka anyị hụ akpa ndị a kpara akpa:
Akpa na pledttes . Ụdị dị mma ma mara mma nke mara mma nke na-eme ka ọkpụkpụ ma ọ bụ rọba plastik. Nhọrọ a ga-emezue ụta mgbede .
Akpa na cross cross . Ndị na-emepụta ihe na-eji akwa akwa akwa iji gosipụta echiche ahụ na usoro ntụhie. Ihe omuma a nwere ike ibu ihe ndabere nke ngwa ma obu bu obere ntinye maka ihe osise.
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ . Otu n'ime ihe na-adịgide adịgide na nke na-adịghị eguzogide bụ ngwaahịa ndị e ji ezigbo akpụkpọ anụ mee ma ọ bụ ihe mgbakwasị mma. Ụdị dị otú ahụ bụ ụwa maka oge ọ bụla na ihu igwe.
Akpa akpa na akpaaka . Ọ bụrụ na ụdị isi gị bụ ịhụnanya na nwanyị, lezienụ anya maka ihe ndị dị mma ma ọ bụ mara mma ndị a na-eji edozi. Ihe ngwọta ọzọ na ejiji ejiji bụ velvet.
Ihe mgbakwunye dị mma, nke na-agbakwụnye mmetụ nke ịma mma na sophistication, bụ ngwaahịa ndị kwadoro site na nhazi site na kọmpụ. Ndị na-emepụta ihe na-eji ma obere ma ọ bụ nnukwu ihe ndozi, iko bekee, matte na mpempe akwụkwọ. Ụdị ụdị ọ bụla nwere ike ịdị n'otu. Akpa ejiji na kporo osisi nwere ike mee na monochrome agba. Maka ngwọta ndị dị otú a, a na-eji mmezi nke otu nha na ndò ya mee ihe, na-achọpụta ngwaahịa dum. A na-ejikwa akpụkpọ anụ mee ihe maka mmebi ahụ n'ụdị fringe. Ngwaọrụ a dị mkpa ma akpụkpọ anụ ma textiles.
Akpa ndị e ji akpa ákwà
Ihe osise dị iche iche na nke mbụ, nke si satin ribbons. Ihe ndozi dị otú a ghọrọ n'ezie maka ụdị textiles, n'ihi na owu, jeans na ụdị akwa ndị ọzọ dị mfe ịdị na iyi ka ha kwekọọ na njedebe karịa akpụkpọ anụ ma ọ bụ leatherette. Achọpụta ihe ejiji na nchịkọta aka mere bụ akpa a kpara akpa na akpa akwa. A na-ekwukarị ihe ndozi ndị dị otú ahụ na-ese onyinyo. A na-ejikọta akwụkwọ ntancha ya na kporo, chaplets na pel, nke na-agbakwụnye na nhazi nke nro na nhichapụ. Ọgwụgwụ nwere ike ịdị na-egbuke egbuke, monochrome ma ọ bụ ụda dị iche nke otu palette.
Akpa akwa a kpara akpa
Ngwaahịa nke yarn aghọwo ụdị ejiji eri ọtụtụ afọ. A na-egosipụta ụdị ndị a dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na ọrụ akwụkwọ. Ndị isi maara ihe na-eme ọmarịcha akpa aka site n'oge okpomọkụ na nke ọkụ, nke na-enye gị ohere ịhọrọ ihe na-adọrọ mmasị na-agbakwunye na onyinyo nke ụdị. Ndị kachasị ewu ewu taa bụ akpa, na-eji ejiji ma ọ bụ jiri mma na-egbuke egbuke. Usoro ọ bụla na-emecha na-abata ngwa ngwa ejiri ya na eriri na eriri. Ụdị na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị karịsịa na ụdị nke ọrụ mmeghe.
Baa akpa na akpaaka
A na-ejide onwe ya, obere akpa elongated na-ejikarị akwa ákwà. Nhọrọ a ga - eji dochie akpa akpa azụ na ihe ọ bụla na-adị kwa ụbọchị, na-agbanye aka gị. Banana dị mma maka imegharị ihe. N'ahịa taa, ọ bụghị naanị monochrome na ụdị e biri ebi, kama ọ bụ imewe na usoro ihe atụ. Akpa nke nwere akpa nwere ike ịbụ eriri akpa, ukwu ma ọ bụ nke a ga-eyi n'azụ azụ. Ihe omuma a n'ile ihe a na-eme ka olu okwu na-egbuke egbuke, na-ekwusi ike na arụmọrụ gị.
Akpa uwe na ejiji
Na nke oge a, ihe a na-akpọ ngwọta na-ahụ maka nlekọta ahụike na-aghọwanye ndị na-ewu ewu. N'ime nchịkọta aka n'akpa uwe ụmụ nwanyị, ndị ahụ bụ ihe nlereanya sitere na akwa anụ. Omume nke nnakọta ndị ikpeazụ bụ akpa akpa na akwa ákwà. Nke a dị oke, ma ihe dị arọ dị mkpa maka ụta kwa ụbọchị. Ngwa nwere ike ịme akwa ma ọ bụ jiri ya akpụ akpụ akpụkpọ anụ - ala, aka, n'akụkụ akụkụ. Ụdị ọdịdị dị mma ma dị mma nke ọdịdị dị nro na akwa mgbaaka. Ihe na-egbukepụ egbukepụ ga-agbakwunye na mma nke nhazi ederede.
Azụ azụ na akpaaka
A na-ejikwa ihe osise na ihe osise eme ihe na nhazi nke ngwa nke oge gara aga. Ụdị njedebe a na-aga site n'oge ruo n'oge maka ihe karịrị afọ iri ise. A maghị ihe a na-ewu ewu na ngwa ngwa ndị ọzọ. Otu n'ime ụdị ejiji kachasị mma bụ obere akpa na ogologo oge na mkpọchi "isusu ọnụ". Nwanyị na-amaghị nwoke ma jiri nlezianya kpoo akpa jetịị na akpaaka na ihe mmeghe. Omume a na-emekarị maka ụbọchị ọ bụla bụ akpa aka na ntụziaka nke boho ma ọ bụ obodo . Maka ngwaahịa ndị ahụ, a na-eji swivel ma ọ bụ suede. Ọnụ ọnụ ahụ pụkwara ịbụ ihe ịchọ mma ebe a.
Akpa ejiji na ejiji
Ụdị mma dị otú a dị mma, dịka ịcha mma, dị mma maka ngwa ọ bụla. Usoro ihe omuma ma obu nduzi ga-adi nma n'ime uzo okpu uzo ma o bu ihe eji emeputa ya na velvet ma obu nke ozo. Maka ihe oyiyi, ụdị ejiji ma ọ bụ matte akpụkpọ anụ na-adị mma maka ụbọchị ọ bụla. Ihe kachasị ewu ewu bụ obere akpa na akpacha mma, n'agbanyeghị ọdịdị. A sị ka e kwuwe, ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, ọ bụ ezie na ọ bụla ejikọta ya na ụwa, ma n'ogo nwere ihe dị iche iche dị mma ma mara mma. Kedu ụdị ụdị ejiji:
Nwepu . Uzo mara mma n'anweghi ihe ederede na ihe eji eme ihe ndi mmadu bu nke kachasi mma n'ubu ubochi. Echiche nke ịcha mma na-acha edo edo na ebe dị omimi gbara ọchịchịrị nwere ike dochie ihe ndozi ya na rhinestones na nkume.
Igbe Hobo na akpaaka . Gbakwunye ihe oyiyi soybe maka ụbọchị ọ bụla nchịkọta mbụ nke ihe bara uru na nhichapụ. Ụdị ụdị nke okpukpu abụọ nke dị nro na-eme nke ọma ma ọ bụ ihe ịchọ mma nke na-egbukepụ egbukepụ ga-enyere aka ịmegharị ụdị ejiji kwa ụbọchị.
Azu paaki . Ụdị dị otú a na nke nwanyị na-adịkwa mkpa maka n'ụdị napinnyh. Ndị na-ewu ewu karịsịa bụ obere akpa azụ maka ihunanya ịhụnanya kwa ụbọchị.
Na-ebu akpa . Maka ndị inyom na-azụ ahịa na azụmahịa na ndị fashionistas ndị na-ahọrọ ndọtị siri ike na onyinyo ahụ, otu nsụgharị dị mma ga-abụ ngosipụta dị mma nke ụdị ike. Maka ngwa ndị dị otú ahụ, mmepụta ihe na-acha okooko osisi na ụdị Zhostovo, Khokhloma na ụdị ndị ọzọ na-ewu ewu.
Akpa Mango na embroidery
Ezigbo ndị mara mma nke usoro ihe atụ a na-atụgharịghị anya agaghị enwe ike iguzogide ụdị akara ahụ sitere na ụlọ ọrụ Spanish. Na nchịkọta ha, ndị na-emepụta Mango na-enye ọnụ ọgụgụ dịgasị iche nke ụdị dị iche iche dị mma. Ihe kachasị ewu ewu n'oge a bụ akpụkpọ akpụkpọ anụ nke nwere okooko osisi na-adịchaghị mma n'ahịrị dị mkpirikpi kama ịṅụ aka. Ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na-enye eriri embray na akaghị aka na-edozi. A na-eji ejiji na-eme ka ejiji Mango jikwa mma, ọ bụghị naanị site na eri, kamakwa ọkpụkpụ, sequins na ọbụna seashells, nke na-ele anya na mbụ.
Igbe nke Dolce Gabbana na akpacha
Ụdị nwanyị na ọkaibe nke Ịtali nwere ike ọ gaghị emetụta ya na imewe ejiji ejiji. Ụdị àgwà nke ejiji ejiji bụ akpa n'akpa ya na ịcha mma dị ka obi. Ihe kachasị mma nke ọmarịcha ihe a bụ isi ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe eji achọ mma. Ihe ngwọta dị na ya bụ ndị na-emepụta Dolce Gabbana bụ obere ogbe na eriri dị iche iche na -eme ihe na-acha okooko osisi. Nlereanya ọ bụla dị na nke a bụ ihe pụrụ iche na imewe nke aka - akwa ma ọ bụ nke dị mkpa na nkume pịakọta, ego na pel .
Akpa akpa na akpa ákwà
Ihe di iche iche, ikekwe, enwere ike iwere ihe di iche iche sitere na Spanish mara amara n'uwa dum. Na nchịkọta ejiji, e nwere àgwà dị mma nke akpụkpọ anụ dị nro n'ahịrị, ihe eji eme ihe na-enweghị atụ. Otú ọ dị, omume ikpeazụ bụ velvet backpacks. Uwe aka a mara mma nke mara mma juru. N'ebe a ihe ngwọta maka onwe ha ga-achọta Fans nke mara, ihunanya na ntorobịa. Ngwaahịa adighi ele anya, ma ha bu ihe ngosi. A na-ejikọta ákwà mgbede nke ehihie na agba ejiji site na ire ụtọ.
Bag Gucci na akpaaka
Eleghị anya, a gaghị enwe nwanyị na-emepụta ihe na-enweghị atụ nke na-anụtụbeghị ụdị ngwa ngwa na nke mara mma nke sitere n'aka ndị Gucci nke Ịtali. Ezigbo nlereanya nke agba anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ bụ ezigbo akpụkpọ anụ. Otu akpa nke nwere akpa ihe na-acha fere fere nwere ọdịdị trapezoidal nke na-adaba ma ụta zuru oke na ihe ụmụ nwanyị na-ahụ n'anya. Ihe dị mkpirikpi ga-adọrọ uche gaa na akpa na akpa nwanyi. Nchịkọta Gucci na-agụnye ụdị textile na abstraction n'ụdị nke akara ngosi na ngwaahịa ahụ na ihe ngosi ngwa ngwa nke dị mma.
Mkpuchi Anya Ụmụ nwanyị
Akpa akpụkpọ anụ ụmụ Francesco Marconi, Italy
Ekeji mink mara mma
Akwa maka iko
Okpokoro okpomọkụ, echetara
Pendants mere nke gold - nhọrọ nke foto nke kacha mma ọjọọ coulombs maka ọ bụla uto
Akpa azụmahịa ụmụ nwanyị - ejiji na-agbakwunye ụda ụlọ ọrụ mara mma
Gold ọla ntị na cubic Zirkonia
Echiche nke Onye - gini bu ya, onye cheghariri uche, ihe onye nche a?
Kedu ka ọ dị mma inye ego?
Cabbage na beets maka oyi
Candles si constipation
Enwere ndị e nwere?
Uzo esi asacha ebe di elu na-adighi nma n'amaghi iko - ihe di omimi di iche iche iji nagide di ocha
Cyst na anya
Onye na-ewu ígwè maka nkuzi ọrụ
Katie Holmes chọrọ iwepụkwu ihe alimoni si di ya
Trampolines maka ụmụaka
Ụmụ nwanyị na-acha anụnụ anụnụ anụnụ anụnụ
Ngwongwo silik na nkpu maka nwamba
Herve Leger uwe
Nwa ahụ nwere anya egwu
Hairstyles - Summer 2014
Azụ na-esi na oven
Nwanyị Na-ahụ Anya
N'ụlọ ikpe, Amber Heard jụrụ ịza ajụjụ
Afọ ole ka Sylvester Stallone dị?
Ogologo ogologo oge maka afọ 2013
Enweghi anya site na komputa